တောင်အာဖရိက သမ္မတနိုင်ငံသည် အာဖရိကတိုက်၏ တောင်ဖက်စွန်းတွင် တည်ရှိသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဒရာနှင့် အိန္ဒိယပင်လယ်ကို မျက်နှာမူထားသည့် ကမ်းရိုးတန်းမှာ ၂၇၉၈ ကီလိုမီတာ (၁၇၃၉ မိုင်) ရှည်လျားသည်။   မြောက်ဘက်တွင် နမီးဘီးယား၊ ဘော့ဆွာနာနှင့် ဇင်ဘာဘွေ၊ အရှေ့ဘက်တွင် မိုဇမ်ဘစ်နှင့် ဆွာဇီလန်တို့ အသီးသီး တည်ရှိပြီး လက်ဆိုသို မှာမူ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ နယ်မြေအတွင်းတွင် တည်ရှိသည်။ 
တောင်အာဖရိကပြည်‌ထောင်စုသည် ကုလသမဂ္ဂတွင် မူလ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်‌သော်လည်း ယင်း၏ လူမျိုးခွဲခြား‌ရေးဝါဒကြောင့် လည်းကောင်း ၊ ဗန်တူစကား‌ပြော နီးဂရိုးလူမျိုးတို့အ‌ပေါ်ထားရှိသော ကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုတို့‌ကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူ့အခွင့်အ‌ရေး ‌ကျေညာစာတမ်းကြီးကို လက်မှတ်‌ရေးထိုးရန် ငြင်းပယ်ခဲ့‌လေ သည်။ အပါးသက်‌ခေါ် လူမျိုးခွဲခြားမှုသည် အဓိကပြဿနာ တစ်ရပ်ဖြစ်လာ၍ ဗြိတိသျှ‌နေသဟာယအဖွဲ့မှ ခွဲထွက်လို‌သော အမျိုးသားပါတီသည် နီးဂရိုးနှင့် နီးဂရိုး လူဖြူကပြားလူထုကို ပိုမိုအုပ်ချုပ်ပေးမည်ဟု ကတိပြုခြင်းအားဖြင့် တဖြည်းဖြည်း အ‌ရေးပါလာခဲ့သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း မ‌ကျေနပ်သဖြင့် တောင်အာဖရိကပြည်‌ထောင်စုနှင့် အဆက်ဖြတ်လိုက်‌လေသည်။
↑ (2012) Census 2011: Census in brief. Pretoria: Statistics South Africa. ISBN 9780621413885။ 12 January 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Coastline။ The World Factbook။ CIA။ 2008-06-16 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ South Africa Fast Facts။ SouthAfrica.info (April 2007)။ 2008-06-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ&oldid=464840" မှ ရယူရန်
၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၉ ဇူလိုင် ၂၀၁၉၊ ၁၄:၀၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။